သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: Avatar ရဲ့ ကွဲပြားသွားတဲ့ genre
ကျမရင်ကို အထိဆုံးအခန်းကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် တိုက်လေယာဉ်ပျံတွေ၊ စက်သေနတ်တွေ၊ ရော့ကတ်လောင်ချာတွေနဲ့ နယ်ခံတွေခိုကိုးနေထိုင်ရာ သစ်ပင်ကြီးကို အမြစ်လှန်ပစ်ဖို့ ချီတက်လာချိန်မှာ၊ နယ်ခံ(Na’Vi)တွေဟာ ရှိတဲ့လေးနဲ့မြှားတွေနဲ့ ပြန်ပစ်ပြီး ခုခံကာကွယ်တဲ့ အခန်းပါပဲ။ ဒါရုပ်ရှင်တစ်ခုပဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးနေတာတောင်မှ မျက်လုံးထဲမှာ လူနီအင်းဒီးယန်းတွေကို လူဖြူတွေ အနိုင်ရသွားပြီး မြောက်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဒေသခံလူတွေ ရဲ့စကားတွေပါ အမြစ်ပြုန်းပျောက်ကွယ်လုဖြစ်တာတွေ နဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲတွေ မျက်စိထဲမှာတန်းစီပြီး ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကောင်းကင်ကိုရဲ့ “ကျွန်” ကဗျာကလည်း ခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ပန်ဒိုရာလပေါ်က နယ်ခံတွေ ခိုကိုးနေထိုင်တဲ့ သစ်ပင်ကြီးတအိအိပြိုလဲ၊ မီးတွေလောင်၊ နယ်ခံ(Na’Vi)တွေ ကမ္ဘာပျက်သလိုပြေးလွှားအော်ဟစ်တော့ နှုတ်ခမ်းတွေတုန်လာပြီး သက်ပြင်းတွေကြိတ်ရှိုက်နေခဲ့ရတယ်။ ဘေးနားက ဆယ်ကျော်သက် ကိုရီးယန်းလေးတွေကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို ခံစားနေပြီးသဘောကျနေကြတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မျိုးဟာ anti-colonialism /anti-capitalism/ anti-exploitation theme တွေကို မသိမသာ ဒါမှမဟုတ် သိသိသာသာကြီးကို မီးမောင်းထိုးပြထားပြီး white-males-leaders တွေကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့ အခြားသော white-guilt-story ရုပ်ရှင်မျိုးလို့ မြင်မယ်ဆိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လူသားတွေဘက်ကကြည့်ရင် Jake ဟာ ကိုယ့်အမျိုးကို သစ္စာဖောက်သူ race traitor တစ်ယောက်။ သူဟာ အမိန့်ကို မနာခံတဲ့အပြင် Na’ Vi တွေဘက်ကို ပါသွားသူ။ ကိုယ်ဆိုရင်ကော Jake နေရာ ဘာလုပ်မလည်း။ လူသားတွေကပို ခွန်အားကြီးတယ်၊ နည်းပညာပိုမြင့်တယ်၊ လှည့်စားတတ်တယ်။ Na’ Vi တွေကျတော့ ဒီအမြတ်ထုတ်တဲ့ အုပ်စုနဲ့ယှဉ်ရင် spiritual သမားတွေ၊ မလိုအပ်ဘဲ တိရစ္ဆာန်တွေကိုတောင် မသတ်ဖြတ်ဘူး။ Jake ဟာ လူသားဘ၀မှာ ခြေမသန်ဘူး။ Na’ Vi တစ်ယောက်ဘ၀မှာ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာ သန်မာတယ်။ Neytiri ကလည်း ငယ်တယ်၊ လှတယ်။ ပန်ဒိုရာကလည်း လှတယ်။ Neytiri ကိုဘေးနားမှာထားပြီး လှပတဲ့ ပန်ဒိုရာပေါ်က ရေတံခွန်တွေထဲမှာ ကူးခတ်ရတာ၊ လေထဲမှာ မျောနေတဲ့ လေပေါ်ကျွန်းကြီးတွေကြားမှာ နဂါးတွေကို စီးနေရတာ ကြည်နူးမိမှာပဲ။ သူဟာ Na’ Vi တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်သွားချင်တာ မမှားဘူး။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားရသူ…..။
ဒီရုပ်ရှင်ကို အပေါ်မှာထောက်ပြတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို အလေးအနက်တွေ သိပ်မတွေးပဲ၊ သူတို့ဘာပေးချင်နေတာလည်းကို ကျမလုပ်မိသလို အကုန်လုံးစုပ်ယူဖို့ မကြိုးစားဘဲ၊ ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်လိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သိပ်လှတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။
Neytiri က Jake ကို သတ်ဖို့မြှားနဲ့ သစ်ပင်တွေကြားကချိန်ထားတုန်း၊ ကောင်းကင်က လည်းမွှေးလိုအရာ (woodsprite) လေးက ဖြေးဖြေးလေးလွင့်မျောလာပြီး မြှားပေါ်မှာ လာနားနေတယ်။ နယ်ခံတွေ မြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ပျံသန်းနေတဲ့သစ်စေ့တွေ… မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ (very pure spirits) ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရာလေးတွေမှ တဆင့် Eywa (deity) ရဲ့ နမိတ်ပြမှုကြောင့် Jake ကို မသတ်တော့ဘဲ၊ သူမမိခင်ဖြစ်သူ ၀ိညာဉ်ထိန်းဆီကတစ်ဆင့် ဘာတွေများသိရနိုင်မလည်းဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့၊ သူမတို့ Na’ Vi တွေ နေထိုင်ရာ သစ်ပင်ကြီးဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။
သူမ မိခင်က Jake ကို Na’ Vi တွေရဲ့ နည်းတွေကို သင်ပေးဖို့ Neytiri ကိုခိုင်းတော့ Neytiri က ငြင်းတာတွေ၊ နောက်ဆုံး မိခင်ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ Na’ Vi တွေရဲ့ နည်းတွေကို သင်ပေးပြီး အနေနီးစပ်ပြီး ချစ်သွားကြတာတွေ။
ပန်ဒိုရာတောနက်ကြီးကို စိတ်ကူတွေရယ် နည်းပညာတွေရယ်နဲ့ အလှဆင်ထားတာကလည်း အံ့မခန်းပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ စိမ်းမြညိုမှောင်နေတဲ့ နတ်သမီးကမ္ဘာကြီး။ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း မြေပြင်ပေါ်ကရေညှိစိမ်းကလေးတွေက မီးလေးတွေလင်းပြီး မီးဝိုင်းဝိုင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေ ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲထွက်လာတာတွေ၊ ထိလိုက်တိုင်းမီးလင်းသွားတဲ့ ပန်းပွင့်တွေ သစ်ပင်တွေ။ ညပိုးကောင်လေးတွေ၊ ထူးဆန်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ neural link ချင်းဆက်သွယ်ပြီး စိတ်နဲ့စေခိုင်းတာတွေ၊ ခံစားချက်မျှဝေတာ၊ အပေးအယူမျှတာတွေ၊ တိရစ္ဆာန်နဲ့လူ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်ရွေးခြယ်မှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ မသိမသာ ပညာပေးမှုလေးတွေ…။
ရုပ်ရှင်Genre ထဲမှာ fantacy နဲ့ action ပါနေရင် သိပ်စိတ်မ၀င်စားတတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လူသားတွေနဲ့ Na’Vi စစ်ပွဲထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး ကမ္ဘာပေါ်ပြန်ရောက်လာသလိုပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်သင့်လား၊ မကြည့်သင်လားလို့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အပေါ်ယံဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်တာတောင် တန်နေပါပြီ။ နည်းပညာနက်နဲမှုတွေ၊ အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြား race တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ယူဆချက်တွေ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်မြင်တာတွေနဲ့…. သူတို့တွေရဲ့ အခြား..အခြားသော အတွေးယာဉ်ကိုစီးပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ .. ပိုပြီးတောင် တန်နိုင်ပါသေးတယ်လို့…
ပင်ဂွင်း နဲ့ ဆော်လမွန်တို့ အိမ်အပြန်…
ရုပ်ရှင်ကို…သိပ်မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် မလေးရေးထားတာတွေကိုဖတ်ပြီးကြည့်ချင်မိသွားတယ်ဗျ…။
Comment by ဏီလင်းညို — January 31, 2010 @ 6:38 pm |Edit This
Comment by တောသားလေး — January 31, 2010 @ 7:02 pm |Edit This
မလေးရေ……… သွားကြည့်ပြီးသွားပြီ…း) ကောင်းတယ် ဆိုတာကို သိပေမယ့် အခု မလေးရေးသလို ပြန်ပြီး မမျှဝေတတ်ဘူး။ နည်းပညာတွေကလည်း ဆန်းသစ်လိုက်တာ အရမ်းပဲ.. မျက်စိရှေ့ကို ရောက်ရောက် လာသလိုပဲ သစ်ပင်ကြီးကို ဖျက်စီးတာကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါ ရောငိုချင်လာတယ်။ မလေးပြောသလိုပဲ တကယ်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ.။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — January 31, 2010 @ 7:21 pm |Edit This
ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ အင်း စချလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို ပြောစရာတွေ များပြီး ဆို့နေလို့ ဆက်မပြောချင်ဘဲ အင်းချလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်း)
အဲဒီ့ကားက မထင်ရဘဲနဲ့ တကယ့်ကို ကောင်းတာဗျာ. ကျွန်တော်လည်း အစက ကလေးကားလောက်ပဲ ထင်ထားခဲ့တာ.
မလေး Point Out လုပ်ပြသွားတဲ့အချက်လေးတွေ တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်. ကျွန်တော်ကတော့ ရုပ်ရှင်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသွားလို့လားမသိဘူး. Dialogue တွေသိပ်မမှတ်မိဘူး.
(ကလေးလေးပါဗျာ… ကျွန်တော့်လက်ကို လာလာကိုင်ကြည့်နေလို့. အဟတ်ဟတ်)
Jake က တကယ်တော့ သစ္စာဖောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး. သူဖျောင်းဖျဖို့ ကြိုးစားခဲ့သေးတာပဲ. သူဟာ အုပ်စုထဲကခွဲထွက်သွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ. တကယ်လို့ သစ္စာဖောက်သက်သက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ Navi တွေကို ခေါင်းဆောင်ပြီး နယ်ချဲ့တွေကို ပြန်တိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး. သူ့ဖာသာ ငြိမ်းချမ်းရာကို ရှာဖွေနေထိုင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေသွားမှာပဲ. ဒါပေမယ့် ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲက Jake အစစ်ရဲ့ ကံကြမ္မာပေါ်လည်း မူတည်တာပေါ့လေ.
တကယ်တော့ Jake ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက အားနည်းသူတွေဖက်က ရပ်တည်တဲ့စိတ်၊ တရားမျှတမှုကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်၊ကြင်နာသနားတတ်တဲ့စိတ်၊ အမျိုးအနွယ်ကိုထိရင် မခံတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ လူသားဆန်တဲ့စိတ်နဲ့ လိုအပ်ရင် ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စိတ်ပါပဲ. အထူးသဖြင့် နဂါးအနီကြီးကို ဖမ်းပြီး Navi တွေ ဆုတောင်းနေတဲ့နေရာကို Jake ရောက်လာတဲ့အခန်း၊ ခေါင်းဆောင်ကို ခွင့်တောင်းပြီး မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခန်း…. သိပ်ကောင်းတယ်. သူ့ကို မယုံကြည်တဲ့ Navi တွေရဲ့ လေးစားအားကိုးမှုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်. အဲဒီ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တောင် ဖြတ်စဉ်းစားမိသွားသေးတယ်. ကိုယ့်ကို သိပ်အထင်မကြီး မလေးစားတဲ့လူတွေဆီက ယုံကြည်မှုရအောင် Miracle ဆန်ဆန် အောင်မြင်မှုတွေ၊ Adventure တွေကို လုပ်ပြဖို့ လိုလားလို့….
ကဲ. ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်လေရှည်သွားပြီ. ကျွန်တော်လည်း ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းရေးချင်နေတာ အခုတော့ မလေးဦးသွားပြီ…
Comment by Yan — January 31, 2010 @ 11:05 pm |Edit This
့ကြိုက်လွန်းလို့ တစ်ခါထက်မက ကြည့်မိပါတယ်။ မလေးလိုတော့ ပြန်မချပြတတ်ဘူးရယ်။
Just wanna say, my mind was obsessed with Avatar for quite some times after I watched it. :)
I love the song ‘I See You’ as well.
Comment by ဇွန်မိုးစက် — January 31, 2010 @ 11:35 pm |Edit This
3D နဲ့ မကြည့်ဘူးလို့ လား..မျက်စေ့မကောင်းတော့လို့ လားတော့မသိ..
ဇာတ်လမ်းပေါ်ထင်မြင်ချက်ကတော့ ဟဲ ဟဲ..
ရဟတ်ယာဉ်မောင်းတဲ့ Pilotမလေး ကချောတယ်နော်…
Comment by minthant2009 — February 1, 2010 @ 5:24 am |Edit This
မကြည့်ရသေးဘူး… ဒါပေမဲ့ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး အရမ်းကို ကြည့်ချင်စိတ်တွေများလာပြီ..
စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ တော်တော်ကောင်းမယ်နော်.. ဒါကြောင့်လဲ နံမည်ကြီးပေတာကိုး..
ပြန်ရေးပြတဲ့သူကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ရေးနိုင်တယ်.. ကျေးဇူး
Comment by ချော — February 1, 2010 @ 7:38 am |Edit This
ကျွန်တော် သွားကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ .. ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်လို့သာ ထပ်ခါထပ်ခါပြောမိနေပေမယ့်.. ဘယ်နေရာကောင်းလဲလို့မေးလာရင်တော့ မဖြေတတ်ဘူး…. ။
အကြိုက်ဆုံးကတော့ Jake နဲ့ Neytiri တို့ရဲ့ facial expression တွေကိုဘဲ… တကယ်အသက်ဝင်တယ်…။ နောက်ဆုံးအပြီးခန်းမှာ သီချင်းဝင်လာတော့ ရင်ထဲဟာသလိုလို လွမ်းသလိုလိုဘဲ..။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းတစ်ခါ တစ်ခါ တွေးမိပေမယ့်….. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘဲခံစားလိုက်တော့တယ်…။
Comment by Evergreen Phyo — February 2, 2010 @ 9:02 am |Edit This
Comment by rose of sharon — February 2, 2010 @ 11:25 pm |Edit This
ရောက်လာပါတယ် မမအိမ့်ရေ… ခရီးအရှည်ကြီးသွားဦးမှာမို့ လာပြီး နှုတ်ဆက်သွားပါတယ် … မမအိမ့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော် …။
ပြန်လာမှ အကြွေးတွေ အားရပါးရ လာဖတ်မယ်…။
Comment by နှင်းဟေမာ — February 3, 2010 @ 12:14 am |Edit This
ဏီလင်းညို … ဒီရုပ်ရှင်တော့ အချိန်ရရင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကွယ်..
တောသားလေး .. မောင်လေးလည်း ကျမ်းမာပါစေ။
ဒဏ္ဍာရီ .. မလေးအဲ့အချိန်မှာ မျက်မှန်ချွတ်ထားရတယ် :( ငိုနေလို့ :P
Yan .. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ.. Jake ကတော့ race traitor ပဲလေ.. မှန်တယ်၊မှားတယ်.. နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ မလေးပြောထားပါတယ်နော်။ ကိုရန်လည်း ရေးပါ။ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်ကွာမှုတွေကို လေ့လာရင်းပိုဖတ်လို့ကောင်းမှာ။
ဇွန်မိုးစက် … မလေးလည်း ကြည့်ပြီး သုံးလေးရက်လောက် ပန်ဒိုရာပေါ်ရောက်နေတယ်။
minthant2009 .. အွန်.. Michelle Rodriguez လား၊ ကိုယ်တော့ သတိတောင်မထားမိပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ်.. မိန်းကလေးချင်းချင်းဆိုတော့ မကြည့်တတ်ဖူးလေ :P
ချော .. လာဖတ်တာကျေးဇူးချောရေ..
Evergreen Phyo.. အရမ်းလှတဲ့ပန်ဒိုရာလပေါ်အရောက် မလေးတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြားကို ခံစားလိုက်ရတာပါပဲကွယ်..
နှင်းဟေမာ .. ညီမလေးကော့မန့်က ပုံတစ်ပုံအောက်ရောက်နေလို့ ဒီဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်နော်။ ပျော်ရွှင်သော ခရီးရှည်ဖြစ်ပါစေ။
Comment by မလေး — February 3, 2010 @ 12:26 am |Edit This
မလေး က ဘာလို့ဘလော့ဂါ ပန်ဒိုရာပေါ် ၃-၄ ရက် ရောက်နေရတာတုန်း..
Comment by ဘလော့ဖတ်သူ — February 3, 2010 @ 1:19 am |Edit This
ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်အကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သိပ်ကြည့်လေ့ ရှိသူမဟုတ်တော့ လဲ တကယ်ကြည့်ဖြစ်မှပဲ ပိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ စာတွေလည်း အတော်များများ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ပို ရယင် ရသလို ပေါ့။ ကျွန်တော့် ဆီလည်း အလည်ရောက်ခဲ့လို့ ကျေးဇူးတကယ်တင်မိပါတယ်။
Comment by မောင်မောင် — February 3, 2010 @ 1:58 pm |Edit This
rose of sharon … မ မင်္ဂလာပါ။
မောင်မောင်.. လာသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမောင်မောင်.. ကျမလည်း ကိုမောင့်မောင့်ဆိုက်ဒ်ကို ရောက်ပါတယ်
Comment by မလေး — February 5, 2010 @ 11:38 am |Edit This
ဖတ်ပြီးပြီကွာ။ သွားကြည့်တော့ဘူး။ အချိန်မရတာရယ်. မအားတာရယ်. အလုပ်ရှုတ်တာရယ်.မြန်မာပြည်ပြန်ချင်ပိုးထပြီးစိတ်လေနေတာရယ်. Tax ပေးရလွန်းလို့တွန့် တိုနေတာရယ်.
၁၃ ရက်နေ့ ကြီးကြီးအိမ် နေ့လည် ၁ နာရီနော်. ဘယာကြော်၊ ဘူးသီး၊ ကြာ်သွန်ကြော် အချဉ်နဲ့ .
Comment by Htate Htar — February 5, 2010 @ 3:15 pm |Edit This
ကြားပဲကြားဖူးသေးတယ် မကြည့်ဖူးသေးဘူးး)
အစ်မရေ ဒီရုပ်ရှင်က အချစ်ကားတွေမဟုတ်တော့ ချစ်သူနဲ့အတူတူကြည့်ဖြစ်တယ်လား ဟိဟိ :P
Comment by မောင်မျိုး — February 5, 2010 @ 8:28 pm |Edit This
Comment by စံလင်းထွန်း — February 8, 2010 @ 7:15 am |Edit This
မလေးရေ…… နေကောင်းလား။ မတွေ့တာ ကြာပြီနော်။ သတိရနေပါတယ်.. လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါ မလေး။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — February 8, 2010 @ 7:14 pm |Edit This
လာဖတ်သွားတယ်မလေးရေ…ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်…ကျမလည်းရေးထားတယ်…ဒါပေမဲ့ ကျမ ခံစား ရသလောက်လေးပဲ ရေးမိတာ၊ မလေးလို မကောင်းဘူး…မစုံဘူး…:) ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ အချိန်ရရင် လာဖတ်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ် ရှင်…:)
Comment by ချစ်ကြည်အေး — February 9, 2010 @ 1:41 am |Edit This
Comment by ချစ်ကြည်အေး — February 9, 2010 @ 1:43 am |Edit This
အစ်မရေ..ကျွန်မကတော့ အလိုက်မသိသလိုများ ဖြစ်နေမလားမသိဘူး..(သူများတွေရုပ်ရှင်အကြောင်းဆွေးနွေးနေချိန်မှာ)
မတတ်သာလို့ပါရှင်..ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကနေဒါကိုအလုပ်လာလုပ်မဲ့ အရှေ့တိုင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိချင်တာလေးတစ်ချို့(နဲ၂ပါး၂)
အစ်မဆီမှာ မေးချင်လို့ပါ…မေးလ်လိပ်စာလေးလည်း မသိလို့ပါ။ မေးလ်ပို့လို့ရရင်လည်း ပို့ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အစ်မမှာ အဆင်ပြေမပြေ အရင်သိချင်ပါတယ်ရှင်။
Comment by မိန်းမိန်း — February 9, 2010 @ 6:41 am |Edit This
မိန်းမိန်း tapyaythu2000@gmail.com ကို စာပို့လို့ရပါတယ်.. laptop ပျက်သွားလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကလိနေလို့ လောလောဆယ်တော့ အွန်လိုင်းကမ္ဘာနဲ့ ခေတ္တဝေးမယ်ထင်ပါတယ်. အားလုံးကို..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Comment by မလေး — February 10, 2010 @ 1:03 pm |Edit This
မလေးရေ…စီဘောက် မရှိတာမို့လို့ ဒီကပဲ ရေးခဲ့တယ်နော်၊ စာလာဖတ်ပြီး မန့်ခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ…:))
Comment by ချစ်ကြည်အေး — February 12, 2010 @ 4:54 am |Edit This
မလေး ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေပါ သွားကြည့်ဖြစ်တယ်.. မလေးနှစ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေက အမြဲတမ်းထူးခြားတယ်နော်
Comment by ShwunMi — February 12, 2010 @ 8:39 am |Edit This